In ka badan 100 Carruur ah oo Alshabaab ka afduubeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool | Baydhabo Online
In ka badan 100 Carruur ah oo Alshabaab ka afduubeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool
Guddoomiye ku xigeenka maamulka degmada Tiyeglow, Cali C/nuur Iiman ayaa sheegay in maleeshiyaadka Alshabaab ay afduubeen in ka badan 100 carruur ah oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmada.
Afduubka safmarka ah ayaa Alshabaab waxaa ay ka bilaabeen deegaanka Ceel Garas ee gobolka Bakool halkaas oo maalin qura ay ka qafaasheen in ka badan 60 ciyaal Iskuul ah, dadka deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka Alshabaab gaari hor dhigeen dugsi Ceel Garas ku yaala isla markaana ka kaxeysteen dhammaan carruurtii iskuulka gaar ahaan wiilashada.
Cali C/nuur Iiman, ayaa sidoo kale, sheegay in carruurta Alshabaab qafaalanayso da’dooda u dhexeyso 14 ilaa 9 sano jir, isagoo xusay in waalidiinta loogu yeerey in ay ilmahooda keenaan ciddii amarkooda guracan ka dhaga adeegtada xabsi iyo lacag $ 2,500 ah laga qaadayo.
Shacabka deegaanka ayaa cabsi iyo wel wel aad u xoogan soo foodsaaray markii Alshabaab bilaabeen in ay afduubaan carruurta, waxayna taasi keentay in waalidiinta qaar la soo baxsadaan dhashooda, si aan looga qafaalan.
Guddoomiye ku xigeenka, ayaa sheegay in u jeedka Alshabaab arrinta ay ka leeyihiin ay tahay in ay carruurta baraan af-kaartooda guracan oo leexan si ugu dambeyn ugu adeegsadaan qaraxyada iyo dagaalada ay kula jiraan dowladnimada ummadda Soomaaliyeed.
Wararka deegaanka ka heleyno, ayaa tibaaxaya in maleeshiyaadka Alshabaab carruurta ay soo afduubaan ku hayaan xero ay ku leeyihiin gudaha degmada Tiyeglow.
Madiino Mad Geedi, oo kamid ah waalidiinta carruurtooda la afduubay ayaa sheegtay in u jeedka Alshabaab ay ka leeyihiin ay tahay in ay ka dhaadhiciyaan in waalidkooda isku qarxiyaan, waxayna codsatay in argagaxisada looga badbaadiyo carruurta.
Waxay tilmaantay, in markii uu soo baxay warka dhiilada ah oo sheegayay in ilmaha la qafaalay ay kamid yihiin kuwii ay dhashay ay ka haajirtay hurddada iyo hunguriga wel wel awgiis.
Xasan Aadan Cabdi, waxaa uu kamid yahay ehelada dadka laga afduubay carruurta, waxaa uu warbaahinta qaranka u sheegay, in haddii aan laga badbaadin carruurta in Alshabaab ay u adeegsan doonaan dhibaatada umadda ay ku hayaan, sida qaraxyada.
Dhibka ugu daran oo iminka heysta dadka deegaanka ayaa ah labo daran mid dooro; waa mida koowaad in ay ogolaadaan isla markaana dhiibaan ilmahooda ama in ay deegaanka oo dhan ka guuraan wixii xoolo nool iyo mood ah oo ay leeyihiina ka tagaan, taas oo ah mid aad ugu adag.
Maleeshiyaadka Aragaxisada ah, ayaa sidoo kale, waxaa waalidiinta ku amreen in ay keenaan carruurtooda oo waxbarasho ugu maqan; sida magaalooyinka, Baydhabo, Muqdisho iyo meelo kale.
Maleeshiyaadka ayaa wali wada qafaalashada carruurta deegaanka sida ay noo sheegeen dadka deegaanka